Xubno lala xiriirinayo Al-Shabaab oo lagu qabtay Gaalkacyo | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Xubno lala xiriirinayo Al-Shabaab oo lagu qabtay Gaalkacyo
Xubno lala xiriirinayo Al-Shabaab oo lagu qabtay Gaalkacyo
Gaalkacyo (Halqaran.com) – Waxaa magaalada Gaalkacyo si dar-dar leh uga socda hawlgallo lagu sheegay in xididada loogu siibayo xubnaha Ururka Al-Shabaab ka tirsan, ee ku dhuumaaleysanaya xaafadaha magaaladaasi.
Hawlgal ay si wadajira magaalada uga sameeyeen Ciidamada maamullada Galmudug, Puntland iyo Xoogaga Danab ayaa lagu soo qabtay koox lala xiriirinayo Al-Shabaab, iyadoo baaritaanana ay ku socdaan.
Saraakiisha Ciidamada horkacaya ayaa habeen walba hawlgal ka sameeya xaafadaha ku yaala labada daamood ee magaalada, waxaana hawlgal walba lagu soo qab qabtaa xubno looga shakisan yahay Shabaabnimo.
Saraakiisha Ciidamada ayaa hawlgalada ku dhaqaaqa markasta oo ay xoggo ka hellaan dadka deegaanka iyo weliba dharcadka faraha badan ee laga hawlgeliyay magaalada.
Sida ay ogaatay mareegta Halqaran.com, ayaa waxaa soo wanaagsanaanaya wada shaqeyntii laamaha amniga kala dhaxeysay bulshada ku dhaqan Xarunta Gobolka Mudug ee Magaalada Gaalkacyo, haddii uu amnigii magaalada u muuqdo mid ka soo reynaya.
Tan iyo markii ay hawlgalada ka bilowdeen Magaalada Gaalkacyo toddobaadyo ka hor ayaa waxaan jirin falal liddi ku ah amniga oo ka dhacay magaaladaasi. Hadana waxaan meesha laga saari karin sida ay hawlgalada u saameeyen dhalinyaradii deegaanka, kuwaa oo in badan oo ka mida laga buuxiyay xabsiyada magaalada ku yaala.
Ugu dambeyn, is-bedelka amni ee magaalada laga dareemay waxaa qayb ka ah, iyadoo la adkeeyay kontoroolada laga soo galo magaalada. Gaadiidka iyo dadka soo gelaaya magaaladaasi ayaa aad loogu baaraa kontoroolada, si ka duwan gaadiidka kale iyo dadka safarka ah ee magaalada ka amba-baxaya.